Fitsaram-bahoaka tany vangaindrano : RAVAN'NY ZANDARY NY BARAZY TAMIN'NY RN12 -
AccueilRaharaham-pirenenaFitsaram-bahoaka tany vangaindrano : RAVAN’NY ZANDARY NY BARAZY TAMIN’NY RN12
18/01/2017 admintriatra Raharaham-pirenena 0
Taorian’ny savorovoro niseho tany Vangaindrano ny alatsinainy lasa teo, dia mbola nitohy ny fanehoan’ireo vahoaka any an-toerana ny hatezerany. Rehefa tsy namaly ny fitakiana nataon’izy ireo mantsy ny zandary ao Vangaindrano dia niroso tamin’ny fametrahana sakanan-dalana tamin’ny alalan’ny vato maromaro, eny amin’ ny lalam-pirenena faha-12 ireo olona. Tao Lopary no nametrahan’izy ireo izany, tanàna iray eo anelanelan’i Farafangana sy Vangaindrano. Saika tsy tafiditra tany an-toerana hatramin’ireo zandary avy any Manakara sy Fianarantsoa tonga hanatevin-daharana ireo manam-pahefana miasa any an-toerana amin’ny fampanjakana ny fitoniana. Tsy afaka mifamezivezy tahaka izany ihany koa ireo fiara mampiasa iny lalana iny. Raha tsiahivina ny zava-nitranga, dia fangatahana hanao fitsaram-bahoaka telolahy namono nahafaty tovovavy 19 taona, mpianatra ao Vangaindrano no nitarika ny korontana any an-toerana. Ny alatsinainy teo no nifampitaona teo amin’ny biraon’ny zandarimaria any an-toerana ireo andian’olona ireo .
Voatery tsy maintsy nanao tifi-danitra, ary nanapoaka baomba lakrimozena noho izany ireo mpitandro ny filaminana mba hanaparitahana ireo olona nitangorona. Niandry ary nanantena ny hamoahan’ireo telolahy ireo vahoaka saingy tsy tontosa ary tsy noeken’ ireo manam-pahefana hatramin’ny farany izany. Tsy faly tamin’izany fihetsika izany ireto farany ka nitady izay irika rehetra hahafahana miteraka korontana any an-toerana ho fanehoana ny tsy fahafaliam-pon’izy ireo. Raikitra ny tora-bato ary nandeha ihany koa ny fandrobana ireo magazay maro samihafa any an-toerana rehefa tonga ny harivariva. Na teo aza anefa izany rehetra izany, dia efa miverina tsikelikely ny filaminana ny an-toerana nanomboka omaly talata. Mbola nanapa-kevitra ny hanidy ny tsenany kosa ireo mpivarotra rehetra ao Vangaindrano noho ny tahotra hiverenan’ny fanararaotana sy ny fandrobana hataon’ireo andian’olona ireo. Misy ihany koa ny fifampiresahana amin’ireo Ampanjaka any an-toerana mba hahafahana mamerina tanteraka ny fandriam-pahalemana.
Notànana teny amin’ny fonjaben’i Tsiafahy i Arfa Houcine Yerres, ny faha-23 Jona 2017, taorian’ny fanolorana azy teo anoloan’ny Fampanovana ary heloka be vava maro no vesatra nanenjehana azy tamin’izany, toa ny fitànana fitaovam-piadiana mahery vaika, ...Tohiny